ကဏ္ဍစုံလင်သက်ကြီးစကား၊ သူယုံကြည်ရာ တိုက်ရိုက်လေလှိုင်းမြန်မာပြည်မှ ပေးစာ
တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ ဗွီအိုအေမြန်မာ - YouTube နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာအပတ်စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာဗွီဒီယိုသတင်း ကဏ္ဍစုံလင် / တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား 2014
နောက်သို့ Page doesn't contain any article. Link to latest data by clicking here. 2014
နောက်သို့ Calendar 2014
480p / 154.0MB
လူထုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Richard Stengel မြန်မာနိုင်ငံ သွားမယ့်သတင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံကို အကာအကွယ်ပေးရေး သဘောတူစာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အမေရိကန်က လိုက်နာလုပ်ဆောင်မယ့်အကြောင်း ဂျပန်ရောက် သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ ကတိပေးချက်၊ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ၊ တမိနစ် အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်တွေ...
လူထုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Richard Stengel မြန်မာနိုင်ငံ သွားမယ့်သတင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံကို အကာအကွယ်ပေးရေး သဘောတူစာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အမေရိကန်က လိုက်နာလုပ်ဆောင်မယ့်အကြောင်း ဂျပန်ရောက် သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ ကတိပေးချက်၊ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ၊ တမိနစ် အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်တွေ ကြည့်ရှုကြရမှာပါ။ ထိပ်တန်းသတင်းများ မလေးမှာ သမ္မတအိုဘားမားနဲ့ တွေ့ဆုံရေး မြန်မာလူငယ် ဆယ်ဦးရွေး အာဖဂန်ဆေးရုံ ပစ်ခတ်မှု ကန် ဆရာဝန် ၃ ဦး သေဆုံး တောင်ကိုရီးယား သင်္ဘောမှောက် ကျောင်းပြန်ဖွင့် လုံခြုံရေး သဘောတူညီချက်အရ ဂျပန်ကို ကန် အကာကွယ်ပေးမည် အမုန်းစကား မပြန့်ပွားရေး အရပ်ဖက် အား အစိုးရ လို ယူကရိန်းအရေး တင်းမာချိန် ကန်စစ်သားတွေ ပိုလန်ကိုဆင်းသက် အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ ယူကရိန်းအရေး တင်းမာချိန် ကန်စစ်သားတွေ ပိုလန်ကိုဆင်းသက် ဂျပန်ရေနံတင်သင်္ဘော ပင်လယ်ဓားပြတိုက်ခံရ ဦးဝင်းတင်ဈာပန စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ဂါရ၀ပြု ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်ရဲ့  ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး မျှော်လင့်ချက် ဦးဝင်းတင်သို့ ဂါရ၀စကားအများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများNo itemsအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများ နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၄-၂၃-၂၀၁၄) နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၄-၂၄-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မြန်မာတီဗွီသတင်း ဦးဝင်းတင် နောက်ဆုံးခရီး အမေရိကန် ကြွပ်ကြွပ်အိတ် သုံးစွဲမှု